Xog: Yaa ka dambeeya khilaafka labada aqal ee baarlamanka Somalia? - Caasimada Online
Home Warar Xog: Yaa ka dambeeya khilaafka labada aqal ee baarlamanka Somalia?
Xog: Yaa ka dambeeya khilaafka labada aqal ee baarlamanka Somalia?
Garoowe (Caasimada Online) – Waxaa dhawaan soo ifbaxay khilaaf xooggan oo soo kala dhex-galay labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, kaasi oo lagu eedeeyay Hay’ad kamid ah QM.
Jawaari ayaa shirka sababta uu u qabanayo lagu sheegay inuu ku dhisayo madal ay ku midaysan yihiin Hay”adaha sharci dejinta dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada, oo isaga madax u yahay.
Cabdi Xaashi ayaa warqad uu u qoray Jawaari uga dalbaday inuu faraha kala baxo arrimaha maamul goboleedyada, islamarkaana uga dambeeyo Aqalka Sare, oo wakiil uga ah dowladda dhexe.
Hay’adda Horumarinta Mashaariicda QM ee [UNDP] oo taageerta Baarlamaanada maamul goboleedyada iyo kan Federaalka ayaa lagu eedeeyay inay maalgelinayso Shirka khilaafka uu ka taagan yahay ee lagu qabanyo magaalada Baydhabo.
“Waxaa lala dirirayaa nimaadka Federaalka, waxaana kow ka ah ka ah hogaanka Gollaha Shacabka, kan labaadna waa Wasiirka Dastuurka oo aan ku habooneyn shaqada,” ayuu yiri Senator Faroole.
Faroole, oo ka hadlayay Shir Jaraa’id oo uu ku qabtay Garoowe ayaa ugu ku baaqay Jawaari inuu joojiyo faragelinta iyo shirarka uu u qabanayo Baarlamaanada maamul goboleedyada.
Senetor-ka ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in UNSOM ay mas’uul ka ahayd musuq-maasuqii ugu weynaa ee ka dhacay doorashadii baarlamaanka, kadib markii uu horseeday in Xildhibaanada qaab beeleed lagu soo doorto.
In Soomaaliya ay ka dhacdo ayuu yiri doorasho qabali ah, iyadoo la qaban karo mid deegaan waxaa mas’uul ka ah Xafiiska QM, oo ka ogolaaday dowladda hore in Xildhibaanada ay soo doortaan 51 qof, taasina ay ka dhalatay musuq-maasuqii ugu ballaarnaa oo waligeed ka dhaca dalka.
Mudanaha katirsan Aqalka Sare ayaa xusay in bishii April ee 2016-kii ay Puntland diiday in doorashada lagu saleeyo qaabka qabiilka, balse ay ku qasbeen Mas’uuliyiin ka socotay UNSOM oo Garoowe yimid xilligaasi.